War Xasaasi ah: Ruushka oo korontada ka jartay Finland
HomeWararka CaalamkaWar Xasaasi ah: Ruushka oo korontada ka jartay Finland
May 14, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Finland, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
Shirkadda Korontada ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay sahayda korontada ee Ruushka ilaa Finland, laga bilaabo kowdii habeenimo.
RAO Nordic, oo ah shirkad hoos timaada shirkadda korontada ee Ruushka ee RAO, ayaa sheegtay in tani ay sabab u tahay “caqabadaha lacag bixinta”. Sida uu qoray wargeyska Finnishka ah ee Yle.
Shirkadda korontada ee dawladda Finland ee Fingrid ayaa sheegtay in waddanku boqolkiiba 10 ka soo dhoofsado isticmaalka korontada ee Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddu waxay xaqiijisay in korontadu aysan khatar gelin ka dib markii ay xirtay korontada Ruushka.
“Sahayda luntay waxaa lagu magdhabi karaa in koronto badan laga keeno Sweden iyo kordhinta wax soo saarka Finland,” madaxa hawlgelinta ee shirkadda, Rimma Bevinen, ayaa ku sheegtay war-saxaafadeed.
Wargeyska NRK ee ka soo baxa Norway ayaa tilmaamay in joojinta saadka Ruushka ay la xiriirto rabitaanka Finland ee ku biiritaanka Ururka NATO ee Waqooyiga Atlantic, taasoo aan la xaqiijin xogta shirkadaha korontada